Hlola i-Edinburgh, eScotland - World Tourism Portal
Hlola i-Edinburgh, eScotland
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Edinburgh, eScotland
Yini okufanele uyenze e-Edinburgh, eScotland
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Edinburgh
Bukela ividiyo nge-Edinburgh
Hlola i-Edinburgh, inhlokodolobha ye Scotland etholakala esifundeni seCentral Belt yezwe. Njengoba kunabantu abacishe babe yi-450,000 (izigidi ezingama-1 esifundeni sedolobha), u-Edinburgh ukwazile ukuhlanganisa kokubili kwasendulo nokwamanje esimweni esiyingqayizivele seScotland. Babukelwe inqaba ebekekayo, uphawu lwedolobha, i-Edinburgh ihlanganisa izingcezu zenkathi ephakathi, ubukhosi baseGeorgia nobubanzi obunamandla bempilo yesimanje ne-avant-garde yanamuhla. E-Edinburgh, izigodlo zezikhathi zasendulo zigxobha amahlombe ngobuhle bokwakhiwa kwesimanje, amasonto ama-Gothic aneminyuziyamu emangalisayo nemipheme. Isikhungo sokuphila ebusuku saseScotland, i-Edinburgh, “ Athens yaseNyakatho ”, futhi idili lengqondo nezinzwa, ukudlala izivakashi ezinkulu, izitolo kanye nohlelo olungalinganiwe lwemikhosi yedolobha unyaka wonke. UHogmanay, unyaka omusha waseScotland, ukhahlela imikhosi, efinyelela ehlobo eliphezulu neTatoo, i-International kanye neFringe, phakathi kwabanye abaningi.
Amadolobha amadala kanye namasha ka-Edinburgh afakwa ohlwini lwezindawo ezingamagugu omhlaba yi-UNESCO e1995. E-2004, u-Edinburgh waba yilungu lokuqala le-UNESCO Creative Cities lapho kuqokwa iDolobha Lezincwadi.
Inhliziyo yesikhathi esiphakathi kuka-Edinburgh eduze neRoyal Mile, eqala ukusuka eSigodlweni iye eSigodlweni sePrincerood. Iningi lamasayithi adumile ngempela akule ndawo.
Enye ingxenye yesikhungo sedolobha yiGeorgia (sekwedlule isikhathi se-18th) Idolobha elisha. Inhliziyo ethengiswayo yedolobha, yilokhu ama-shopaholics enza umugqa wakho.
Amasheya kanye neCanonmill
Indawo engafani neyodwa enyakatho yeNew Town, ukuyothenga okuzimele okujabulisayo nendawo enhle yokuphumula edolobheni - iRoyal Botanic Garden.
Indawo ethekwini enomqondo ozimele ka-Edinburgh indawo okuya kuyo ngokwayo.
Edinburgh / East
Isifunda solwandle sasePortobello nedolobhana lomlando laseDuddingston bobabili basempumalanga yedolobha.
Edinburgh / South
Ingxenye edumile yedolobha yabafundi, ngakho-ke kunezindawo eziningi ezithandekayo zokudla neziphuzo. Ngaphandle kwalokho kunendawo yokudlala yangaphandle ye-Edinburgh yePentland Hills, kanye neRoslin Chapel ethakazelisa.
Edinburgh / West
I-zoo enhle ka-Edinburgh ilapha, kanye nethempeli lezemidlalo eliyinkundla yezemidlalo yombhoxo iMurrayfield.
I-Railbridge ku-Firth of Forth, isimangaliso sobunjiniyela esakhelwe e-1890
I-Edinburgh isogwini olusentshonalanga ye IScotland 's empumalanga ye-Lowlands, etholakala ogwini oluseningizimu lwe-Firth of Forth. Isimo se-Edinburgh siwumkhiqizo wentaba-mlilo yasendulo (zombili izinqaba zaseCastle kanye ne-Arthur's Seat ziyizintaba-mlilo ezidilikile) nentaba-mlilo yakamuva (eveza izigodi eningizimu yenqaba kanye neNor'Loch endala, njengamanje indawo yePrinces Street Gardens ).
Isikhungo esingumlando sakwa-Edinburgh sitholakala yiPrinces Street Gardens, indawo ebanzi yepaki enhliziyweni enkabeni yedolobha. Ngaseningizimu yezingadi kukhona isigodlo, esakhiwe ngaphezulu kwedwala eliqothulayo, futhi siguqulwa imigwaqo yangezikhathi zasendulo yeDolobha Elidala kulandela iRoyal Mile eceleni kogu olusempumalanga. Ngasenyakatho kwePrinces Street Gardens kukhona iPrinces Street uqobo - indawo yokuthenga eyinhloko ka-Edinburgh - nesikhathi saseGeorgia New Town, esakhiwe ngemuva kwe1766 kuhlelo lwegridi ejwayelekile.
Ubufakazi buveza ukuthi abantu bahlala e-Edinburgh iminyaka eyizinkulungwane. Ukutholwa kwezinto zakudala kubonisa ukuthi abantu babehlala kule ndawo ekuqaleni kwe-8500 BC, cishe iminyaka eyi-5,000 ngaphambi kwe-Bronze Age. Kuma-600s, kwakhiwa elinye lamatholethi okuqala. Ngekhulu lesikhombisa, amaNgisi ahlasela futhi aqamba igama elithi “Burd Eiden.” Elithi “Burgh” laliyigama lenqaba. Ngemuva kwamakhulu ambalwa eminyaka, abakwaScot baphinda babuyisela umhlaba wabo futhi kwakhiwa isigodlo. Kwaqhamuka idolobha elincane, futhi ngekhulu le-12th, i-Edinburgh yaba ngumphakathi ochumayo.
IsiNgisi sikhulunywa cishe kuphela. Lokhu kushiwo, abahambi abaningi bakuthola kunzima ukuqonda labo abakhuluma ngokushesha nangezwi eliqinile laseScotland. Esimweni esingavamile, kungenzeka ukuthola umuntu okhuluma namaScot noma isiGaelic.
I-Edinburgh inesimo sezulu esishisayo (esisho ukuthi sinomoya omnene noma olinganiselayo). Ngesikhathi esingunyaka, amazinga okushisa angasukela ekuphakameni kwe-22 ° C kuya kuma-1 ° C aphansi. Isimo sezulu, kusobala, sinomqondo waso. Ngenkathi uSepthemba evame ukuba yinyanga ethambile kakhulu kuthi u-Ephreli abe ome kakhulu, i-Edinburgh ayinasikhathi sokomisa esifanele. Abahambi bacishe baqinisekiswa ukuthi, noma ngabe bahambela isikhathi sini sonyaka, lizokuna ngezikhathi ezithile.
Abahambi kufanele banake ukuthi i-Edinburgh igcwele kakhulu (indawo yokuhlala ehlakaniphile) ngezikhathi zomkhosi omkhulu wehlobo eliphakeme (Agasti kuya ekuqaleni kukaSepthemba) kanye noHogmanay (ezungeze uSuku Lonyaka Omusha / i-1 Januwari). Izivakashi ngalezi zikhathi kufanele zihlele kusengaphambili (nangaphezulu konyaka ngaphambi kwesikhathi!) Zokubhuka indawo yokuhlala ephakathi namathikithi omcimbi ngalezi zikhathi.
I-Edinburgh idolobha elihle eligcwele umlando. Ayikho enye indlela engcono yokuyibona kunokuhamba.
Ngenkathi abahambi bezothola izinto ezilindelekile (isib. Ama-kilts noma i-whisky, isiphuzo sikazwelonke saseScotland), i-Edinburgh futhi inesibalo esikhulu sabathengisi abazimele abanikezela konke kusuka kumpahla yamahlaya ukuya kubuciko obuhle.
UPrinces Street eNew Town unikeza ukuthenga ngokubuka. Zonke izitolo lapha zidluliselwe kolunye uhlangothi lomgwaqo, zinikeza abathengi umbono ongaphazamiseki weDolobha Elidala. Izivakashi zizothola izitolo ezinkulu zomnyango njengeJenners (isitolo esidala kakhulu somnyango ozimele waseScotland kuze kube lapho sitholwa khona e2005), eDebenhams naseMarkand naseSpencer (esivame ukubizwa nge- “M&S”). Kukhona Isitolo se-Apple nezitolo eziningana zezempilo nobuhle.
IMultrees Walk in New Town, ohlangothini olusempumalanga yeSt Andrew Andrew Square iya esitolo sokunethezeka. Le yindawo yokuthola uLouis Vuitton, umthengisi wemfashini wokunethezeka uHarvey Nichols, Swarovski, imidwebo yobuciko obuhle nezinye izitolo eziningi ezithengisa ubucwebe namawashi aphezulu.
Abathengi abanambitha i-eclectic, nalabo abathanda ukuphequlula, izitolo ezizimele kufanele baye eGrassmarket e-Old Town. Izitolo lapha zibonisa okuncane kwakho konke, kusuka ezingutsheni zomvini kuya ekuphrintweni namamephu wekhulu leshumi nesithupha namamephu.
Abalandeli bakaHarry Potter badinga ukuthatha izintambo benyuka ezansi eVictoria Street e-Old Town. Lo mgwaqo kuthiwa ube ugqozi lwe- “Diagon Alley.” Abazingeli beSouvenir bazothola izitolo zezincwadi, isitolo sokwenza amahlaya, ubucwebe nezitolo zezingubo. Zingabona ngisho nomthakathi noma umthakathi eqoqa izimpahla kumaThe Cadies & Witchery Tours. Futhi, uma unesifiso kuHarry Potter, kungakufanele ukuthi uvakashelwe eNdlini Yezindlovu eGeorge IV Bridge. Indlovu House iyindawo yokudlela lapho umbhali uJK Rowling abhala khona izincwadi zikaHarry Potter phezu kwekhofi nekhekhe, futhi isayinwe ngisho nangewindi ukubonisa isithombe.
IRoyal Mile ese-Old Town inenani eliphakeme kakhulu lezitolo “zesiko” eziyisikhumbuzo. Ibhukelwe i-Edinburgh castle ne-Holyrood House, iRoyal Mile iyikhaya leminyuziyamu eminingi ethokozisayo neziza zomlando. Cishe yonke indawo inezitolo zayo zezipho eziyisikhumbuzo. Le futhi yindawo yokuthola izambatho “ezenzelwe ukwenziwa eScotland”, zokugqoka “zesiko” zaseScotland (okusho izinkamba kuzo zonke izindlela zepartini ezaziwayo bese ezinye), uHarris Tweed kanye neWhiskey. Ezinye izitolo, njenge-The Scotch Whisky Experience enikezela izinkambo zokwenza i-whisky ezihambisayo, futhi zinikeza izikhathi zokunambitha.
Idolobha lasechwebeni iLeith laziwa kakhulu ngesikhungo salo sokuthenga ngaphakathi i-Ocean Terminal. Izitolo zase-Ocean Terminal zinezitolo ezinkulu zamagama omkhiqizo kufaka phakathi: Izikhala, igeyimu, iVue Cinema, iHolland neBarrett kanye neThe Perfume Shop. Izitolo ezihlukile kakhulu, kepha, zitholakala ngaphandle kwe-Ocean terminal. Izitolo ezizimele lapha zinikela ngezincwadi, ifenisha esekela isandla sesibili, izipho ezisebenza ngomusa, kanye nezindawo zasendulo.
Ngokusho kwezikhulu zezokuvakasha zaseScotland, i-Edinburgh inezindawo zokudlela eziningi kumuntu ngamunye kunelinye idolobha lase-UK. Abahambi bazothola konke kusuka kwizindawo zokudlela ezinhle ze-Michelin ezikalwe ngama-pub amancane. Futhi kulolo hlanganiso, izindawo ezinikela ngendabuko yaseScotland yokudla, izitsha zokudla kwasolwandle, nokuthile okubhekiswe ekudleni kwaseNdiya, kwaseMedithera noma kwelesiShayina. Uma uyifisa, kukhona indawo yokudlela e-Edinburgh eyenza.
Isidlo sasekuseni esigcwele saseScotland ngokuvamile siqukethe amaqanda, isigaxa esimnyama, isigaxa se-tattie, umvimba weLorne, ubhontshisi obhakazisiwe, ubhontshisi, amakhowe othosiwe notamatisi othosiwe, singasasho izinhlangothi zeyogathi, okusanhlamvu nezithelo ezintsha. Futhi konke kugezwe phansi ngetiye noma ikhofi. Kuyiqiniso, asikho isidlo sasekuseni saseScotland esingaqedwa ngaphandle kwesitsha esine-porridge.
Iporridge yenziwa ngokuhlanganisa oats, amanzi kanye nedeshi kasawoti. Ukuxubana kuyabe sekufudunyezwa bese kuvuswa ngensimbi yokhuni (Ithuluzi lokupheka laseScotland elivela ngekhulu le-15th) ukuvikela iphalishi lingangeni. Yidla yodwa noma engeza amantongomane, ushukela, amajikijolo nobisi.
Amazwe aseScotland aqothulayo kanye nemithambeka emnene isize ukukhiqiza ezinye zezinhlobo eziphambili zenkomo emhlabeni. Ngenxa yalokhu, inyama yenkomo newundlu kuvame ukusetshenziswa kwemali yokugibela yendabuko.
IHaggis isidlo sikazwelonke saseScotland. Abenzi beHaggis bathatha u-anyanisi, i-oatmeal, i-suet (inyama yenkomo noma i-mutton fat) nezinongo bese uzixuba ndawonye ne-offal (organ organ) yemvu, yengulube noma yenkomo. Ngokwesiko, le ngxube ibilokhu ibilisiwe esiswini sesilwane esihlatshwayo. Namuhla, iningi labahleli beHaggis basebenzisa i-casing yokwenziwa.
I-Pudding emnyama, ngokungafani neHaggis, isinda kuma-carbs futhi ikhanya ku-offal. Ukuxubha koshizi, oats, ibhali, izinongo negazi eligcotshwe kukoprotheni futhi kukhishwe njengesausage. Ngokwesiko ukudla kwasekuseni okukhonzwe kakhulu kuma-B & Bs, kutholakala ngokuningana ngokwengeziwe kumamenyu we zokudlela ezinenkanyezi ezinhlanu.
IScotch Pie kanye noBridie yizinhlobo ezimbili zamaphayi enyama adliwa ngabantu bendawo. IScotch Pie inegobolondo le-khekhe eliqinile futhi ligcwele inyama eyisiga. Uhlu lwezithako ezigcwele zaseScotch Pie luyimfihlo eqashwe kakhulu. UBridie uphayi wenyama onama-pastry we-shortcrust. Ukugcwaliswa kwayo kuqukethe inyama yenkomo egayiwe, u-anyanisi nesithokelo.
Ama-dessert aseScotland akhombisa abakhiqizi bezitshalo baseScotland, abalimi bamama, nabenzi be-whisky.
ICranachan iyi-dessert ekhanyayo eyenziwe ngama-raspberries, ukhilimu ophehliwe, uju nama-oats athosiwe. Inani elincane le-whisky ngezinye izikhathi liyangezwa.
Ithebhulethi yinguqulo yaseScotland yobuqili. Kwenziwe ushukela, ubisi oluhlanganisiwe nebhotela.
I-Shortbread ikhukhi okuyisisekelo ibhotela eliningi elihlanganiswa nefulawa encane noshukela. Ilungiselelwe kahle, isinkwa esifushane sicebile, sicwebile futhi siyisiphundu esimnandi setiye laseScotland.
Ukulahlwa kukadoti kweClootie kuyidessert yasendulo yaseScotland. I-pudding emnandi eyenziwe ngezithelo ezomile, i-suet, ushukela, ufulawa, iscrumbs, ubisi oluncane kwesinye isikhathi isiraphu yegolide. Indlela ethandwayo yokuyidla ukuyihlanganisa nge-ukhilimu ne-whisky.
Kukhona izikhungo ezizohamba zonke izinambuzane ezisakazeke kuyo yonke ipokhethi yedolobha. Qaphela, amanye ama-pubs wasendaweni angaba rough kancane azungeze imiphetho, ikakhulukazi eLeith.
Ukuze uphuze isiphuzo esingeyona i-alcohol uphuze i-Sweden yesibili isiphuzo kuzwelonke - u-Irn-Bru. Kuyindlela enhle yokwelapha i-hangover.
Ngokuqondene nesiphuzo sokuqala saseScotland, uzothola i-The Scotch Whisky Experience phezulu kwe-Royal Mile, enikeza "ukuvakasha" okusebenzisana komlando nokuziqhelanisa nokugcotshwa kwe-Whisky, okuphelele ngokugibela umgoqo wokugibela. Le indawo enhle ongaya kuyo uma ufuna ukusampula i-whisky, ngoba inokhetho olukhulu kakhulu (i-200 +) ngentengo efanelekile. Ama-whiskyys amadala adla ukubiza ngaphezulu futhi okungajwayelekile kunikezwa. Isimo sezulu singekho kangako njengoba abanye bengathanda njengoba sithambekele ekuthuleni okuthe xaxa - uma ungathandisisi ukuvakasha okusebenzisanayo futhi nje ufuna ukuzama amanye ama-whiskeys bese uhlola ukufakwa kuhlu kwezinye izincwajana ezinhle ze-whisky kodwa kunoma yikuphi, Iningi lama-Edinburgh pubs livame ukuba namalungu afanayo amaningi e-Scotch whiskeys onapo. Ukudla okukhona esikhungweni kuyithengiswa ngentengo enhle futhi kuhle.
Izindawo eziningi zokugcina izinkabi zomdabu zizungeze idolobha.
Izindawo eziningi ezaziwayo zendabuko eGrassmarket, e-Old Town. Lawa ma-pubs yizicupho zezivakashi futhi zivame ukuthandwa kakhulu ngokuhambela amaqembu e-stag ne-hen, ngakho-ke abantu bendawo bavame ukungacaci.
Amakilabhu amaningi wesimanje azungeze uCowgate nomgwaqo weLothian. UGeorge Street edolobheni elisha ubamba imigoqo eminingi ka-Edinburgh.
I-Edinburgh isungulwe njengendawo yezokuvakasha amakhulukhulu eminyaka, ngakho-ke kukhona ukhetho olukhulu lwendawo yokuhlala etholakalayo kubahambi. Qaphela kodwa-ke ukuthi izindleko ezijwayelekile zokuhlala indawo yokuhlala ehhotela e-Edinburgh ziphakeme kunanoma yikuphi enye indawo eScotland, futhi uma uhlela ukuvakasha ngesikhathi somkhosi (Aug), ezungeze uKhisimusi noNyaka Omusha, noma ngempelasonto yomdlalo wasekhaya waseScotland e i-6-Nations Rugby (Mar / Apr, 2 noma i-3 minyaka yonke), uzothola ukuthi zonke izinhlobo zokuhlala zibekelwe ukubhuka kusengaphambili, futhi amaphrimiyamu aphezulu angasetjenziswa kumanani wegumbi. Akunakwenzeka ukufika endaweni ethile ukuze uhlale unolwazi oluncane ngalezi zikhathi, kepha ngeke ukwazi ukuphikisana futhi futhi kuzobiza.
Izindawo zokudlela eziningi ze-intanethi nezindawo ezinendawo enkulu etholakala kuyo yonke indawo zikhona kuyo yonke i-Edinburgh.
Imitapo yolwazi eminingi kamasipala kulo lonke idolobha inama-PC anokufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala.
Amanzi ompompi aphephile ukuwaphuza, njenganoma yikuphi eScotland. Izivakashi zingakudla lokhu kudla ngaphandle kokwesaba ukuthi zingafika ekhaya lezilokazane ezikhathazayo.
Cishe yonke imishini yemali e-Edinburgh izokhipha amanothi asebhange laseScotland, kepha kukhona okumbalwa okuvame ukuba namanothi weBhange LaseNgilandi, okungenzeka kube lula uma uhamba Scotland,
Uma ufuna ukuhlola i-Edinburgh udinga umhlahlandlela ongawubona eduze nezindawo eziya e-Edinburgh